Daandiiwwan gara Asmaraa geessan hangam amansiisoo dha? - BBC News Afaan Oromoo
Daandiiwwan gara Asmaraa geessan hangam amansiisoo dha?
Madda suuraa, De Agostini Picture Library
Karaa Finfinnee gara Asmaraa geessu walakkaan
Abbaan Taayitaa Daandiiwwan Itoophiyaa nageenya karaa gara Ertiraa deemu ifa baasera.
Daaandiiwwan ijoo gara Ertiraa geessan imala gara fuulduraa godhamuuf akka adda baasame daarektarri sab-quunnamtii abbaa taayitichaa obbo Saamson Wandimmuu dubbataniiru.
Gariin sadarkaa amma jiraniin tajaajila kennuu kan danda'an tahuufi gariin immoo erga sakatta'amaniifi suphaan godhameefi booda qophii tahuu jedhaniiru.
Finfinnee irraa ka'e Gondariin godhee gara Humaraa fi riqa Takazeen karaan aspaaltii 991km dheeratuufi gara Ertiraa geessu nagaan akka jiruufi haa ta'uutii yeroo dheeraaf riqicha Takazee irratti konkolaataan deemee waan hin beekneef sakatta'amuu qaba jedhaniiru.
Haala wal-fakkaatuun Finfinneerraa ka'ee Moojoo, Awaash Arbaa, Dichi'eettoo fi Bureerraan godhee karaan aspaaltii 879km Asab galu, yeroo ammaatti tajaajila kennaa kan jiru tahuu himanii, karaan Dachi'eettoo hanga Buree geeddaraa waan taheef sadarakaa murtaa'een konkolaataaf rakkisaa tahuu danda'a jedhaniiru.
Marab akkamiin gahu?
Karaan aspaaltii 933km Finfinnee irraa ka'ee Addigiraatiifi Zaalaambassaan gara Asmaraa geessu qophii tahuusaa daarektarichi mirkaneessaniiru. Karaan aspaaltiifi cirrachaa 1005km inni hafe immoo Finfinnee, Maqalee, Adawaa, Raamaa irraan gara Marab geessu keessumaa Adawaa hanga Marab karaan jiru immoo ijaarsi godhamaa akka jirus himaniiru.
Riqichi laga Marab gama wal-fakkaatuun sakatta'amuu qaba jedhaniiru.
Karaa sana fayyadamuun imaltoota geejibuu yerootti jalqabamu garuu kan ifa godhu abbaa taayiticha dha jedhaniiru.
Itiyoo-Ertiraa: Pireezidant Isaayyaas Afawarqiin eenyu?
MM Abiy lolli xumuramuu erga ibsanii as Tigraay maal irra jirti?
Doonaaldi Tiraampi loltootni Ameerikaa Somaaliyaati akka baafaman ajajan
Chaayinaan Alaabaa ishee Adeessarra dhaabde
Lammiin Keeniyaa 'du'ee ka'ee' ture amma dhugaatti du'e
4 Muddee 2020
Somaaliyaan 'shira xaxuun biyya tasgabbii dhorkite' jechuun Keeniyaa himatte
3 Muddee 2020
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo 'Shaneen nyaapha Booranaati' jechuun labsan
2 Muddee 2020
Raayyaan Ittisaa iddoo 'murteessoo' ta'an to'achuu ibse
Sababa lolli adeemaa jiruuf deeggarsi hin qaqqabne- UN
Saayintistii beekamtuun dhalattuu Itoophiyaa taate Google irraa ari'amuu himte
Saayintistiin ganna 15 barruu Taayimsiin filatamte 'rakkoo adunyaan fura' jette
Albuuda baastootni Chaayinaa 18 ta'an lafa jalatti du'an
Lolli Tigraay sadarkaa ammaarra akka hin geenye gochuun 'rakkisaa ture' - Tibor Nagy